Izixhobo eziPhambili ezisetyenzisiweyo kwixesha elichaziweyo kunye namaHlathi eHlathi
Izilwanyana kunye Nendalo Izilwanyana kunye ne-Wildfires
Isixhobo soBuchule esibaluleke kakhulu kwiNgcaciso kunye neFree Fire
Nolu uluhlu lwezixhobo ezisisiseko, izixhobo, kunye nezixhobo ezikhutshwe kubasebenzi bokucima umlilo abasebenzayo kwaye kuyimfuneko ukulawula umlilo ochazwe yiplani yehlathi okanye umlilo ongaphantsi koxinzelelo. Ukuba nomnye umcimi womlilo uxhotywe ngesisombululo sesandla esifanelekileyo kunye nezixhobo zokukhusela kunye nekhonkco yonxibelelwano kunye nezinto zokuzithuthuzela phantsi kweemeko ezishushu kakhulu zibaluleke kakhulu.
Izixhobo Zesandla Somlilo Wase-Wildland
IBhunga lakhe lomlilo. Amazon.com
Izixhobo zesebenzisa izixhobo zomlilo zasendle zisoloko zimiselwa ngumsebenzi waloo mntu. Amanani kunye neentlobo zezixhobo zesandla ezisetyenzisiweyo zixhomekeka nokuba ingaba umlilo ulawulwa okanye awukho olawulo kunye nobukhulu bokuqala okanye obukulindelekileyo. Ndiquka kuphela i-rake ne-flap, eziyimfuneko phantsi kweemeko zomlilo.
Isigxina esiqinileyo esinamazinyo amakhulu okusika amanxantathu, ndiyithandayo kwaye ndibizwa ngokuba ngumkhandlu womlilo. Esi sixhobo senzelwe ukumba umgca womlilo. Iintloko zokusika ziseburhulumenteni be-12-width-type frame. Ngokuqhelekileyo iqulethwe ngamacandelo omatshini omatshini omine atyunjwa kwisakhiwo sesimbi.
Olunye uhlobo olukhethiweyo lwegama lakhe lubizwa ngokuba yi-McLeod ngomlilo kunye nenye ye-rake-and-hoe edibanisa ithuluzi lokumba umlilo elithandwayo kwiindawo ezisentabeni kunye namadwala.
Umlilo womlilo okanye u-swatter usoloko ulungelelanisa apho kukho ukukhanya komlilo okufutshane kunye nokutshiza kunye nokunciphisa amanzi athobileyo. Zingabinzima kodwa zomelele ngokwaneleyo ukuba zenze umsebenzi wokubetha nokutshisa imililo ebangelwa yimigodi ejikelezayo ejikelezayo emanzini omlilo.
I-Backfire Torch ne-Backpack Pump
Umqhubi okanye I-Torch Backfire. Steve Nix
Isibhakabhaka sokubuyela emva okanye isibane sokusila siyinxalenye ebalulekileyo yezixhobo ezisetyenziselwa ukulawula "umlilo ngomlilo" xa icebo lokulawulwa kwehlathi libonisa ukutshiswa okumiselweyo . Le "ityhulo" inenela umxube wegesi kunye ne-diesel kwi-wick kwaye idala umlilo ngaphakathi kwe-firebreak ekhuselekileyo kunye nommandla ocetywayo wokutshisa. Inokutshintsha kwakhona isiqalo somlilo ongasalawulwayo xa usetyenziswa kakuhle.
Umlilo wokuqala "owenziwe" usetyenziswe ngaphakathi kwimililo ebomvu ukulawula izinga lokusasazeka komlilo kunye nokwandisa ummandla "omnyama" otshisa kwindawo ekufutshane nomlilo. Yenza kanye into efanayo kwi-firefire kunye nezixhobo eziyimfuneko kumntu oshisa umlilo womlilo ozama ukulawula umlilo.
Ipompo ye-5-gallon yamanzi ipompo yinto encinci yokukhusela okongezelelweyo ukusuka kwiindawo ezibonakalayo eziwela ikhefu kunye nokutshisa i-snags kunye neziqu ezikufutshane nomtya womlilo. Nangona kunjalo, inzima kakhulu, kufuneka ihlale izaliswe kwaye kufuneka isetyenziswe kuphela ngumdlali otshayela umlilo. Olu hlobo lompompo lusetyenziswe kakuhle, kunye neeprayipi ezinkulu zamandla ompompoza wamandla, xa unesiseko se-ATV kunye nokuphulwa komlilo.
IsiKhuseli esiKhuselekileyo kubaFizi beMlilo
Uninzi lwebhokisi elinzima. Amazon.com
Ukugqoka iimpahla zokukhusela kuyimfuno yeeninzi ze-US kunye ne-arhente yokukhusela umlilo. Nazi ezinye izinto ezintathu ezibalulekileyo kwaye kufuneka ziqwalaselwe njengezixhobo eziqhelekileyo kuzo zonke ukutshiswa okulawulwayo kunye neengqumbo zomlilo.
Iingcingo zomlilo zasendle zaseWalland kunye neengxubane - i-shirt impahla kufuneka ibe yikhwalithi ye-Nomex enokutshatyalaliswa okukhulu nokutshatyalaliswa komlilo.
Isikhwama esipheleleyo se-brim - isitya kufuneka sibe nekhebhile ekwakhiwe kwi-polyethylene ephezulu.
Izigulane zokubulala umlilo zasendle zase-Wildland - Ezi glavu kufuneka zibe nobude obuninzi beemikhono ezenziwe ngombane otshabalalayo.
Amacangci omlilo kwabase-Fireland Firefighters
Indawo yokukhusela umlilo. Terra Tech
Ukubulawa komlilo kweWorland ngumsebenzi onzima kwaye kwenziwe kwimeko engqongileyo. Inkonzo yeeHlathi yaseUnited States ifuna ukuba bonke abasebenzi babo bokucima umlilo kunye nabontrakthi banxibe intente ekhuselekileyo ebizwa ngokuba yindawo yokukhusela umlilo . Bobabini umlilo kunye nomlilo ongenamlilo bangaba yingozi ngexesha lemililo emininzi engalawulekiyo kwimigqomo embalwa nje kwaye le "ndawo yokuhlala" ayisoloko isebenzayo xa isetyenziswe ngokungekho kakuhle okanye kufuphi ne-fuel fuel ( see Yarnell Fire ).
Indawo yokukhusela umlilo yaqulunqwa ukuba ibe yinto yokugqibela ekhethiweyo yokusebenzisa xa iimeko kunye nexesha zenza ukuba kungenakwenzeka ngexesha lomlilo. I-United States isenza iindawo zokukhusela zivumelekile kubadlali-iCanada idibanise izikhuselo zomlilo.
Isikhuselo somlilo esitsha se-M-2002 sinika ukhuselo olwandisiweyo ukusuka kushushu oluvuthayo kunye nolushukumisayo kwiimeko zengxangxasi yomlilo. Ingathengwa kwi-Agency Logic Agency kwi-https: //dod.emall.dla.mil/
Iseti epheleleyo iquka: I-Shelter yoMlilo NSN 4240-01-498-3184; i-nylon ephethe ityala le-NSN 8465-01-498-3190; Iiplastiki yeebhokisi zeplastiki NSN 8465-01-498-3191. Ubungakanani obusetyenzisiweyo: 86 "ende; 15-1 / 2 "phezulu; 31 "ngokubanzi. IiNkonzo zeeHlani kwi-5100-606. (NFES # 0925)
Ukuqaphela nokuLawula Umthi Burl
I-Serotiny kunye neConotinous Cone
Iinqununu ezinhlanu eziphezulu zokubulala iinambuzane
Ulwaphulo oluchanekileyo phantsi koTitshala Inkcazo yeJob
Iingcali ze-Astronomical vs. Seasons Weather
IQela leMzantsi - I-Compass Ceremonial Complex
Abaninzi abasenyongweni abasebenza nabo